Ny loza ateraky ny fitiavana mihoapampana | Bezzia
Maria Jose Roldan | 20/07/2021 22:36 | fifandraisana
Ny fahaizana mitia olona dia zavatra tena mahafinaritra izay olona maro no tsara vintana mahatsapa. Na izany aza, rehefa miresaka fitiavana dia zava-dehibe ny fametrahana andiana fetrany satria raha tsy izany dia mety hivadika ho zavatra mampidi-doza ho an'io olona io ny fitiavana toy izany.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia asehonay anao ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitiavana salama sy ny fiheverana diso tafahoatra.
1 Ny faniriana dia tsy mitovy amin'ny fitiavana
2 Inona no hatao amin'ny fihetsika manintona
Ny faniriana dia tsy mitovy amin'ny fitiavana
Amin'ny fifandraisana salama dia tsy maintsy mandresy hatrany ny fitiavana. Raha ny mifanohitra amin'izay no miseho ny fiheverana dia lasa poizina amin'ny zava-dratsy aterak'izy ireo ny mpivady.
Ny fisehoan'ny fihetsika mihoa-pampana dia vokatry ny tsy fisian'ny filaminana sy fahatokisan-tena avy amin'ny iray amin'ireo antoko ao amin'ny fifandraisana. Etsy ankilany, manafoana tanteraka ny fahafahan'ny mpiara-miasa ilay fiheverana ary mametra anao amin'ny karazana fihetsika rehetra, zavatra tsy tokony avela amin'ny karazana fifandraisana.
Amin'ny lafiny iray, ny fitiavana dia manome fahalalahana sy fanajana, zavatra tena ilaina amin'ny mpivady rehetra izay mihevitra ny tenany ho salama. Misy ny fanoloran-tena sasany avy amin'ny roa tonta, saingy tsy voafetra izy ireo amin'ny toe-javatra rehetra, zavatra misy fiatraikany tsara amin'ny hoavin'ny mpivady.
Inona no hatao amin'ny fihetsika manintona
Tsy azonao atao amin'ny toe-javatra rehetra ny mamela ny tenanao hanohy amin'ny fifandraisana izay misy fitondran-tena tafahoatra mihoatra ny hafa. Ny antoko lohahevitra dia tsy maintsy mamarana avy hatrany ny fifandraisana misy poizina toy izany. Zava-dehibe ny hipetrahan'ny mpivady sy hamakafaka ny toe-javatra amin'ny fomba milamina ary tadiavo ny antony isehoan'ny fitiavana be loatra toy izany.
Ny fiaraha-miory dia soatoavina tena ilaina rehefa miatrika an'io olana io. Tsara, noho izany, fa ny olona be fiheverana dia afaka mametraka ny tenany amin'ny kiraron'ilay lohahevitra, hahatsapa sy hahafantatra fa ny fitondran-tena toy izany dia tena meloka tanteraka. Ny fitiavana amin'ny mpivady dia midika fanajana ny olona tianao ary ny fahatokisana azy ireo an-jambany.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fitiavana mihoapampana toy izany dia vokatry ny tsy fisian'ny filaminana sy fahatokisan-tena miharihary. Zava-dehibe noho izany ny fanampiana ilay olona misarika ny saina hanana fahatokisana haingana sy hanamafisana ny fahatokisanao tena. Ny fandresena ny tsy fandriam-pahalemana dia zava-dehibe raha ny amin'ny fanajana ny vadinao sy ny fitiavana azy ireo amin'ny fomba mahasalama.
Raha tsy mihatsara ny raharaha, torohevitra ny handeha ho any amin'ny matihanina tsara iza no mahay miatrika ny olana hatramin'ny voalohany ary mametraka vahaolana amin'izany. Ny fanampiana rehetra dia kely fotsiny mba hialana amin'ny fieritreretana eo imason'ny mpivady.
Raha fintinina, na dia mpivady maro aza no tsy mahatsapa ny olany, Ny fitiavana dia tsy mitovy amin'ny fiheverana ny olon-tiana. Ny fitiavana dia tokony ho salama amin'ny fotoana rehetra ary ny fiafarany dia tokony hiara-mivoatra mba hahitantsika ny fiadanam-po miaraka amin'ny fahasambarana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mitia sy mitia ny tenanao aloha ianao ary avy eo, afaka mitia ny vadinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Ny loza ateraky ny fitiavana mihoapampana
Inona ny atao hoe Buffalo Hump ary ahoana ny famongorana azy